घर / ब्लग / माफ गर्नुहोस्, चर्पीमा यी समस्याहरू छन्, गुणवत्ता समस्या होइन!
2020 / 12 / 12 वर्गीकरणब्लग 6120 0
बाथरूम व्यापार स्कूल
घर किन्नु धेरै उपभोक्ताहरूका लागि सजिलो हुँदैन, र मर्मत गर्नु कुनै पनि सजिलो छैन, र तिनीहरू भित्र जान खुसी छन्! तर आफन्त र साथीहरूले भने कि कसरी तपाईंको शौचालय आधार खुट्टा मा क्र्याक? यसले सौन्दर्यलाई असर गर्दछ, डिल गर्न समस्याजनक, र अत्यन्त असहज देखिन्छ। त्यसोभए मालिक साह्रै उदास छ, ऊ जति बढी असजिलो, Angger को बारेमा सोच्दछ। मेरो नविकरणमा यति पैसा खर्च गर्न कत्तिको सजिलो छ?
केहि समय अगाडि अर्को खबर आयो: "टोटोमा १ 150० सेटको शौचालय उही जिल्लामा क्र्याक भयो, निर्माताले भन्यो कि गैर-गुणवत्ता समस्याहरू" निकालिएको थियो। चong्गकिing जिल्लामा अवस्थित जिल्लामा, १ 150० भन्दा बढी परिवारहरूले आफ्नै टोटु शौचालयमा क्र्याक भेट्टाए। केहि पानी टयाँक फुट्नेहरू हुन्, केहि आधार फुट्ने, र अझ बढि, खोलको आधार ठूलो टुक्राबाट खसेको छ।
यस प्रकारको स्थिति मालिकहरूका लागि ज्यादै पीडादायी हुनुपर्दछ। शौचालय राम्रो शौचालय हो, यस प्रकारको स्थिति कसरी देखा पर्न सक्छ। यो गुणस्तरको समस्या हुनुपर्दछ। त्यसोभए, नमूना निरीक्षणको विभिन्न प्रकार, उजुरीहरू, स्टोर समस्या र यस्तै। जे भए पनि, पैसा हराउन सकिदैन। अन्तमा, परीक्षकहरूले नमूना निरीक्षण परिणामहरू देखाउँछन् कि: किनकि जिल्ला चौंचिंग जिल्लामा अवस्थित छ, जाडो सर्द अपेक्षाकृत चिसो छ, साथै छुट्टी समुदाय आवासको जाडोमा दीर्घकालीन निर्जन बिना। शौचालय भित्र पानी लामो समय को लागी सजिलै आइसिंग गर्न को लागी, ताकि शौचालय स्थिर र क्र्याक, र शौचालय को गुणवत्ता सम्बन्धित छैन। मालिकले यो नतिजा सुने, "सुख्खा छैन, म किन पैसा बचाउँछु, कडा मेहनत मेरो जीवनको लागि मात्र, शौचालयको मर्मत गरियो, कसरी यस तरीकाबाट बन्ने! अझै स्टोर समस्या खोज्न बाँकी छ "।
उपभोक्ताहरू, सबै भन्दा पछि, एक पेशेवर डिजाइनर होइन, शौचालय ट्या slow्क ढिलो भइरहेको छ, खुट्टाको दराराहरूको आधार, शौचालय स्थापना भित्ताको नजिक छैन, स्थानीय पानी रस्टको पहेंलो शौचालय सतह। तुरुन्तै बाथरूम स्टोर फेला पार्नुहोस्। "तपाईंको शौचालयमा समस्या छ!" भुक्तान, भुक्तान, भुक्तान, तीन पटक भन्न महत्वपूर्ण कुरा। सबै प्रकारका गुनासोहरू क्षतिपूर्ति दाबी गर्न! धेरै जसो, बाथरूम टर्मिनल बिक्री स्टोरहरु पनि धेरै गलत छन्। राम्रो शौचालय अन्य घरहरू कुनै समस्या छैन। तपाईलाई किन समस्या छ? केवल कटुता खाने गूंगा!
वास्तबमा, शौचालय ट्या tank्क भर्न ढिलो छ, खुट्टा क्र्याकको आधार, शौचालय भित्तामा स्थापित गर्न सकिदैन, शौचालय धुने सतहमा स्थानीय पानी खियाको पहेंलो, शौचालय फ्रीज क्र्याक। धेरै पटक यो शौचालय गुणस्तरको समस्या हुँदैन!
एक: पानी भर्नको लागि शौचालय ट्या tank्क एकदम ढिलो छ
यदि त्यहाँ एक शौचालय ट्या tank्क पानी इंजेक्शन धेरै ढिलो छ। पहिले पानीको दबाब जाँच गर्नुहोस्। यदि पानीको चाप धेरै सानो छ भने, यो पानी आपूर्ति समस्या हो र शौचालयको गुणस्तरसँग यसको केही सरोकार छैन। यदि पानीको चाप सामान्य छ भने, कृपया जाँच गर्नुहोस् कि पानी ट्या tank्कीमा इनलेट वाल्व मलबेद्वारा अवरुद्ध छ कि छैन। यदि त्यहाँ छ भने, कृपया मलबे खाली गर्नुहोस्।
दुई: शौचालय एक अवधिको लागि स्थापना भएपछि, बेसको खुट्टमा क्र्याकहरू देखा पर्दछ, र विस्तार हुनेछ
शौचालय एक समयको लागि स्थापना भए पछि, आधारको खुट्टमा क्र्याकहरू देखा पर्दछ, र विस्तार हुन्छ। यो स्थापनाको कारण हो, आधार गुहा सिमेन्टले भरिएको छ, र शौचालयको गुणस्तरको केही गर्न छैन। । सिमेन्टले पानी अवशोषित गर्दछ र शौचालय क्र्याक गर्न विस्तार गर्दछ। सही स्थापना विधि यो हो: एउटा टुक्रा शौचालयको लागि निक्काबारी। खुट्टा स्क्रू फिक्सको साथ विभाजन, वा सिलिकॉन फिक्स्ड शौचालय चेसिसको साथ हुन सक्छ।
तीन: शौचालय स्थापना भित्ताको नजिक हुन सक्दैन
भित्ता बिरुद्द शौचालय स्थापना पछि जो शौचालय निकासी दूरी र भित्ताबाट सुरक्षित ढल पाइप दूरी छनौट नजिक छैन, र शौचालय गुणस्तर संग केहि गर्न छैन। शौचालय डिस्चार्जको सामान्य निकासीको ड्रेनेज दूरी २१० मीमी, mm०210 मिमी, mm०० एमएम तीन विशिष्टताहरू छन्। सामान्य परिस्थितिमा १ 305 ०-२१० मिमी, २400--190०210 मीमी, 285०-305०० मिमी को स्थापना आकारलाई अनुमति दिनुहोस्, त्यो भनेको शौचालयको पछाडि २० मिलिमिटरको भित्ता खालीबाट।
प्रयोगकर्ताहरूले घरमै आरक्षित ड्रेनेज पाइपको भित्ताबाट वास्तविक दूरी र खरीदको अनुमति दिईएको आकार आकार अनुसार शौचालय विशिष्टता छनौट गर्नुपर्दछ। यदि पर्खालबाट निकास पाइप दूरी मृत सेट गरिएको छ र मानकीकरण गरिएको छैन भने, त्यहाँ उपयुक्त निकास दूरी शौचालय विकल्प छैन, तपाईं अर्को १ शिफ्टर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ समायोजन गर्न। शिफ्टर सामान्यतया अधिकतम दूरीको १०० मि.मी. बीचको केन्द्र बढाउन वा कम गर्न सक्दछ।
चार: शौचालय धुने सतह स्थानीय पानी रस्ट पहेलो
शौचालय एक लामो समय को उपयोग गर्नुहोस्, सजिलै देखिन सजिलो शौचालय धुने सतह स्थानीय पानी रस्ट पीलो घटना। शौचालय धुने सतह स्थानीय पानी रस्ट पहेलो, धेरै सुन्दरता असर, प्रयोग पनि असहज, सफा र थकित छ। यो स्थिति मालिकहरूले सोच्दछन् कि शौचालय एक समस्या हो, वास्तवमा पानीको गुणस्तर, र शौचालयको गुणवत्ता सम्बन्धित छैन। पानीको गुणस्तरको कारण, शौचालय प्रयोगको लामो समय पछि सतहमा पहेंलो फोहोर हुनेछ। यस समयमा, तपाईं सफा गर्नुहोस् सफा गर्न र त्यसपछि पानीको साथ फ्लश गर्न सक्नुहुन्छ।
पाँच: शौचालय फ्रीज क्र्याक
शौचालय शौचालय ट्या tank्क वा सम्प क्र्याकिंग, वा पूरै भुई प्लेट प्लेटमा झर्छ, वातावरणीय कारकहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, जाडो धेरै चिसो छ, भित्री तापक्रम0डिग्री भन्दा कम छ, शौचालय ट्या tank्कमा राखिएको पानी जमेको छ। बरफको मात्रा फराकिलो पानी ट्या tank्कलाई समातेर राख्न विस्तार गर्न सक्दछ। यदि मालिकले लामो समयसम्म शौचालय प्रयोग गरेन भने ट्या the्कीमा पानी लामो समय सम्म बग्दैन, र बरफ सजिलै ट्या tank्कमा क्र्याक हुन्छ।
शौचालय प्रयोगको प्रक्रियामा, त्यहाँ विभिन्न घटनाहरू छन्, र मालिकको चिन्ता बुझ्न योग्य छ। जे भए पनि प्रायः मालिकहरूले आधा जीवनका लागि कडा परिश्रम गरेका छन् यस घरको लागि। तर धेरै पटक शौचालय ट्या tank्क भर्न ढिलो हुन्छ, आधारको खुट्टमा क्र्याक हुन्छ, शौचालय भित्तामा स्थापित हुन्छ, शौचालयको धुलो सतहमा स्थानीय पानी खिया पहेलो हुन्छ, शौचालय फ्रीज क्र्याक छ किनभने स्थापना सही छैन, अनुचित प्रयोगले गर्दा हुने , र शौचालय गुण सम्बन्धित छैन। शौचालय गलत आरोप लगाइएको छ। यस पटक बाथरूम स्टोर विक्रेतालाई धैर्यता चाहिन्छ मालिकलाई वास्तविक समस्या फेला पार्न मद्दत गर्नका लागि, समस्या समाधान गर्न मालिकलाई सहयोग गर्न राम्रो हुनु राम्रो हो। यदि उपभोक्ता अझै पक्का छैन भने, तपाईले यो WeChat संग्रह राख्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक गलतफहमीहरू रोक्न ग्राहकहरूलाई फर्वार्ड गर्न तयार!
उत्पादनको साथ समस्या, हामी सबै चाहँदैनौं। व्यापारीहरूले ग्राहकहरूको सेवा गर्ने मानसिकतालाई उनीहरूको समस्याहरूको सामना गर्न राम्रोसँग राख्नुपर्दछ, र उपभोक्ताहरूले पनि व्यापारीहरूप्रति सहिष्णु हृदय राख्नु पर्छ, आखिर, ग्राहकहरूको राम्रो प्रतिष्ठा भनेको व्यापारीहरूले चाहेको कुरा हो।
अघिल्लो :: अरू कसैको घरमा डबल सिंक डिजाइन देखे पछि, म ईर्ष्यालु थिएँ! अर्को: बाथरूम नवीकरण गर्न सकिन्छ !!! बाथरूम मान्छे थाहा छ
2021 / 01 / 16 2456
2021 / 01 / 15 1671
2021 / 01 / 15 1820
2021 / 01 / 11 2750
2021 / 01 / 11 2109